Ibhaso eliphumeleleyo leQspa resort apartment 1 lokulala - I-Airbnb
Ibhaso eliphumeleleyo leQspa resort apartment 1 lokulala
Igumbi elinye lokulala elinamazantsi-kwintshona ye-balcony yepool yokujonga kwindawo eyi-5 yokuqala ye-ApartHotel complex enezibonelelo ze-Spa. Indawo izolile kodwa kwi-900m ecaleni kolwandle unobomi obuninzi basebusuku. Le ndlu ibandakanya ikhitshi lezixhobo ezigcweleyo, indawo yokuhlala ene-tv, indawo yokuhlamba impahla kunye neendawo zokucoca, ibhedi yobukhulu bokumkani enegunjana kunye negumbi lokuhlambela elineshawari yemvula kunye nokufudumeza umgangatho.
I-wifi yasimahla kuyo yonke i-complex.ve inala
Usetyenziso lwasimahla lweziko lokuzilolonga (Umqeqeshi waBucala xa kukho imfuneko ekhoyo), inkundla yentenetya, indawo yespa njengesauna, iphuli yangaphakathi nangaphandle, ibhafu yomphunga, iHama kunye nejacuzi yangaphandle.
inkqubo yokuphulula ezininzi ezikhoyo (kwimfuno).
Indawo yokudlala yabantwana kunye nephuli yabantwana, igadi enkulu enemithi yeziqhamo, indawo yokupaka, ibha yangaphandle, ixesha leti.
Iindwendwe zingonwabela izitya zalapha kwindawo yethu yokutyela ekhitshini lika-Q. I-shuttle yasimahla ukusuka elunxwemeni ukuya ehotele ikhona. Oyena mntu uphumelele ibhaso iQ Beach Club iku-900m kuphela, ungacela ukudluliselwa xa kukho imfuneko. IQHUBELA i-COVID-19
I-QBeach kunye ne-Qspa zikufanele ngokwenene ukutyelela.
Ungaqhagamshelana nam lonke ixesha 7/7
ndiphendula ubuninzi be24h
Iilwimi: Nederlands, English, Français, Türkçe